» बिहान खाली पेटमा लसुन, कसरी खाने ?
बिहान खाली पेटमा लसुन, कसरी खाने ?
२ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:४३
एजेन्सी – नेपाली खानाको स्वाद बढाउनका लागि लसुनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । लसुनको पातदेखि यसको केस्रासमेतले तरकारीको स्वाद बढाइदिन्छ । यसको सुगन्धले समेत तरकारीलाई थप स्वादिष्ट बनाउँछ । लसुनमा पाइने एलिसन र एजोइन साथै आर्गोसल्फर यौगिकका कारण शरीरालाई मजबुत बनाउँछ ।